1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Litetwin Ducktwin Tune-UP Inqubo | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Take it Ukudoba!
1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Litetwin Ducktwin Tune-UP Inqubo
Motor ngale phrojekthi Model 3303S yomkhiqizo B 18010.
Le yimoto efanayo yemodeli uBabamkhulu ayenayo ngenkathi ngisemncane. Nginezinkumbulo eziningi ezimnandi zale moto futhi bengifuna eyodwa yokuyibuyisa iminyaka. Ekugcineni, umngani wanginikeza le moto ngoba usekhulile kakhulu ukuthi angayisebenzisa. Wayazi ngokusabela kwami ​​lapho ngiqala ukubona ukuthi ngizokulungisa, ukuze lokho kugijime kahle futhi kukusebenzise kahle. Le moto ibigcinwe negesi esesethangini iminyaka emibili noma emithathu. Ngiyitholile ukuthi ingakhwehlela empilweni, noma ngabe igesi endala, kepha ngabona ukuthi izodinga ukushuna kahle. Bekubuye kuphume negesi evela ku-carburetor. Ngikholwa ukuthi lapho ngiqeda ukulungisa le njini, izosebenza ngayo yonke indlela njengoba yayenza ngenkathi isisha. Ungathenga lawa ma-motors cishe u- $ 150 kuya ku- $ 200 ku-e-Bay. Uma uzimisele ukuthenga cishe ama- $ 100 ngezingxenye, ungakushuna futhi ukwenze kusebenze njengokusha. Ngaphandle kwezingxenye zomculo, ngeke kusebenze kahle ngezizathu engizozichaza njengoba ngibhala le nqubo.
Abantu olusizayo ngesikhathi iboats.com ngesikebhe izinkundla enikeziwe ulwazi olulandelayo ngalokhu motor.
Evinrude imodeli 3302:
Kumbe RPM: 4000
Lokufuduka: 5.28 cu.in. = 86.5 CCM
Isisindo: 34 lbs. = 15.4 Kg
isilinganiso Gear: 17: 28
Spark Imigudu: Champion J6C gapped at .030 "(J6J ayisatholakali)
Lower iyunithi uwoyela: OMC / BRP 'HiVis' noma okulingana 80 / 90W esasinenjini uwoyela gearcase kusukela Walmart, njll
Okokhelekayo / Oil ukuxubana: 24: 1 87 octane gas TC-W3 uwoyela esasinenjini (bayakhohlwa Sae 30w).
Isikhathi ukuze Kuqalwe - Uma unegesi ethangini, ungaqhubeka futhi uzame ukuqala imoto yakho. Akukho phuzu elingakanani kulokhu ngaphandle kokuthola umuzwa wokuthi izinto zithuthuke kangakanani lapho usuqedile. Ngaphambi kokuba uyiqale, faka into engezansi emgqonyeni kadoti ogcwele amanzi. Qaphela ukuthi imoto iphenduka kahle kanjani nokuthi ukuqala kokuqalisa kuyasebenza yini. Futhi, qaphela ukuthi imoto ibukeka inokucindezelwa okuhle. Hlola intambo nesibambo ukubona ukuthi zidinga ukushintshwa yini.
Njengoba ngiqaqa le njini, ngihlela ukuhlanza konke engingakwenza ngendwangu nokufafaza okokuhlanza. Kunezinto eziningi zokuhlanza ezikhethekile ezitholakalayo zalokhu, kepha ngimane ngisebenzisa okokuhlanza indlu okuvamile engikuthole ngaphansi kosinki. Ngiyethemba ukuthi ngizoyibuyisa ngaphambi kokuthi umkami ayithole ukuthi ayikho. Ngihlela nokugcina lezi zingxenye zihlelekile njengoba ngizihlukanisa.
Khumula Motor Amakhava - CHOFOZA LAPHA ukuze uthole imininingwane.
Izindawo ezinkulu sizogxila kukhona Powerhead, Okokhelekayo / Carburetor, ukuthungela, Impeller futhi Lower Unit igrisi.
amandla Shona - Ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokulungisa imoto yakho, ufuna ukuqiniseka ukuthi imoto izophenduka futhi ucindezelwe ngawo womabili amasilinda. Uma imoto ingeke iphenduke ngokuguqula i-flywheel noma kubonakala sengathi ayinakho ukucindezelwa, khona-ke imoto yakho idinga okungaphezu nje kokucwaninga okulula. Kuzofanele unqume ukuthi ufuna ukulungisa kabi imoto yakho nokuthi ikhono lakho lokukhanda lizokuthatha kangakanani. Ukuzilolonga kulula. Ukukhulula ama-piston nokubuyisela ukucindezelwa kungaphezulu kobunzima obuphakathi nangaphezulu kobubanzi balesi sihloko. Angifuni ukusho ukuthi imoto ayikwazi ukulungiswa noma ayifanele ukulungiswa kodwa ngemoto engiyisebenzisela le ndatshana, akudingekile. Kwesinye isihloko, kudingeke ukuthi ngikhulule ama-piston emotweni ye-Johnson 15 HP futhi ngiyinikeze impilo entsha. Ungathola igeji yokuminyanisa esitolo sakho sezingxenye zezimoto esiseduze cishe ngama- $ 20 noma ama- $ 30.
Ungahle uthande ukumiselela intambo yokuqalisa kanye nesibambo sezintambo zokuqala. Kungenzeka futhi ukuthi ubuyisele entwasahlobo yokubuyisa intwasahlobo uma kunesidingo. Zonke lezi zingxenye zisatholakala kepha bezingadingeki kulo msebenzi.
Carburetor - Anytime une imoto endala ukuthi bothe isikhashana, ungacabanga ukuthi carburetor udinga isevisi. Negesi, ikakhulukazi uma ixubene lamafutha bayakuphendukela ukuvenisha noma ngenye gum up carburetor yakho. Nakuba ziningi carburetor yokuhlanza izithasiselo ungakwazi bafake fuel tank yakho noma fafaza ngqo carburetor, ngeke ususondela zokufeza into efanayo njengoba carburetor tune-up. Ngisho noma motor lagcinwa ngaphandle uphethiloli carburetor, le gaskets kungase zome futhi crack noma ngokushesha ukuwohloka uma azama ukuyisebenzisa futhi. Okuwukuphela kwendlela ukuze uqiniseke ukuthi carburetor uya ukusebenza kahle ukususa, ahlukanise, zihlanzekile, futhi reassemble nge izingxenye ezintsha, esikhundleni futhi ulwenze ushintsho okuyizinto izinyathelo kokwenza carburetor tune-up. CHOFOZA LAPHA izithombe ezinemininingwane kanye nezinqubo kokwenza carburetor tune-lo motor.
Ignition System - Ngaphandle plugs inhlansi plug izintambo, zonke kohlelo ukuthungela itholakala ngaphansi ligcina uthi lokuphotha luzungeza. Uhlobo magneto ukuthungela kule motor kuyinto Ligcina uthi lokuphotha luzungeza Magneto nge Full Amaphuzu. Umsebenzi we uhlelo ukuthungela kuyinto ukukhiqiza ngokwanele voltage (Azungeze 20,000 volts) ukuthi angene phambili igebe use inhlansi plugs udala inhlansi futhi kwaqala ingxube fuel / emoyeni, futhi ukuze uqinisekise ukuthi voltage silethwa ipulaki inhlansi ne ncamashi ilungelo isikhathi CHOFOZA LAPHA izithombe ezinemininingwane kanye nezinqubo kokwenza ukuthungela uhlelo kutsha-up salokhu motor.
Impeller futhi Lower Unit -
tank Testing - Nakuba engaqiniseki ngempela ithangi test, angizange ukugcwala emgqonyeni 55 engamalitha, hang motor emphethweni nomlilo zayiqeda. Awufuni ukusebenzisa motor ephuma emanzini nhlobo, futhi ayikho indlela enhle ukubeka indlebe muffs kule motor, ngakho-ke kufanele ihlolwe noma ngesikebhe e emanzini noma ithangi abanye. Ngiyajabula angizange uzame lokhu echibini ngoba motor akazange abe nezinkinga ezithile okwakudingeka kubhekwane. Kwavela ukuthi amanzi awuzange afundwa emhlabeni amasilinda ngoba motor bangazuza ashisayo ngemva okungenani iminithi ukugijima futhi kwadingeka ivale phansi phambi kuyoba obonakele. Le nkinga okweqile awusheshanga sobala ngoba amanzi sishaye aphume izimbobo ezincane esidayisa unit ephansi. Lapho ngasola ukuthi motor ayezama ukumbalekela ashisayo, mina yanqamula amanzi ekhanda isilinda, futhi ngokushesha waqala sizzle baphendukela umusi. Lokhu kwakusho ukuthi ikhanda kwaba okungenani 212 degrees Celsius ngaphansi kwezinga lapho kufanele kube ngezithuba 150 degrees Celsius ngaphansi kwezinga lwengubo lapho egijima. Nakuba ukuba wadumala, Ngajabula ukuthi kwadingeka ukuhlakanipha ukuze ivale motor phansi wasiqashisa luphole ngaphambi kokuzama qala futhi uyisebenzise futhi futhi.
Ukubeka Izinkinga Ukushisa nge Cooling System - Kuze kube kuleli qophelo, bengingafikile ngadonsa ikhanda isilinda ngoba motor ngabe Pheqa futhi bebonakala kokucindezelwa ezinhle. Nge okweqile motor, kwaba sobala ukuthi kwakuzodingeka umbe ujule ukuze sithole ukuthi kungani amanzi awuzange afundwa ngokusebenzisa inhloko amandla. Sicela uchofoze lapha ukufunda mayelana nemininingwane yale nqubo.
Okuningi Tank Testing - Ngemva emuva bese ukulungisa izinkinga ohlelweni ukupholisa, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba aphinde ukwenza ukuhlola ethangini. tank wami kwakuba elula 55 engamalitha emgqonyeni. I izitolo ukukhanda kuyodingeka test amathangi olukhudlwana. Bazophinde babe ukuhlolwa zasesiteji ukubeka umthwalo motor ngaphandle kokuvala amanzi kakhulu. Njengoba lena imoto encane, ngahambela phambili ushiye esi ku wadubula up motor e umgqomo wamanzi. ukukhathazeka kwami ​​kokuqala kwaba ukuthi ukubona uma imoto ngabe overheat futhi ekungiphumuzeni, kodwa kube kungenjalo. Ekuqaleni, motor akuzange kubonakale ukusebenzisa njalo njengoba coughed futhi sputtered futhi wadala ifu elikhulu lentuthu okwesibhakabhaka. Mina-ke waqaphela ukuthi nakuba ngahlanza ethangini gas, kungenzeka ukuthi kwakunezibhebhe eziphelele ezinye izinhlayiya eba carburetor. Emva egijima motor isikhashana, mina ngadonsa isitsha carburetor kanye ongaphakeme-speed jet futhi bahlanza kubo. Ngaphinde ngakuchaza le nqubo izikhathi eziningana. Kwakubonakala sengathi vibration motor ukugijima kwaba ongqongqozayo zonke crud okuxekethile. Lokhu motor kwakungenziwanga ukugijima okungenani 10 noma 12 iminyaka ngakho kwakukhona eziningi crud ethangini nophethiloli imigqa. Kwadingeka amaphupho motor kusukela ngomhla wokudonsa kuqala futhi egijima kahle emva ingoma up kodwa empeleni, kwakufanele ukusebenzisa isikhashana ngaphambi kokuba uqale ukuba enze izinto njengedemoni isikebhe motor ezinhle futhi. The eside motor wagijima, ngcono ke kwabonakala sengathi kokuba iyaphulwa. A 55 engamalitha emgqonyeni akuyona ekahle ukuhlolwa ngoba motor kuzokwenza impela sesifufula uma isebenza ngokushesha. Futhi, imisinga emanzini okubangelwa motor ukusheshisa kanye ijubane. Ngazama ulungise carburetor futhi wenze eyize motor kodwa lokhu engcono kwenziwa echibini endaweni ethile. Ngagijima namathangi ambalwa nophethiloli ngokusebenzisa imoto futhi ngokuyisisekelo wasiqashisa ahlale khona futhi siqalise 3 noma 4 amahora ngenkathi ngahlanza umsebenzi wami endaweni. Ngangikhathazeke ukuthi motor akaziqhathululanga kahle ethangini kodwa mina waqinisekiswa ngumngani ukuthi motor baziphathe ngcono kakhulu kanye kwaba ngomkhumbi futhi esemzimbeni evulekile yamanzi, futhi kwacaca ukuthi, wayeqinisile . Lapho ngifika lapho engingakwazanga ukuphuma echibini nale motor, ngajabula kakhulu ngendlela ke kwenziwa. Ngike ngaba le motor izikhathi eziningana manje futhi iqalisa okukhulu. Ngithola eziningi izincomo esuka kubantu abayithanda lokhu motor 42 oneminyaka-ukuthi mina abuyiselwe ekuphileni. Ngibheke phambili abasebenza kanye bebhala motors nakakhulu esikhathini esizayo.
Thatha Motor Ukudoba - Kwakuyizwi Februwari 27, 2009, e-Indiana, kodwa angibanga ulinde. Ngathatha Evinrude yami Lightwin ukuba Turtle Creek Reservoir eningizimu nje Tere Haute Indiana ukuhlola it out. Turtle Creek Reservoir is wotha ilahle ngamalahle amandla Generating isitshalo. Funda lokhu okulandelayo esihlokweni ukuze uthole ukuthi uhambo lwami ukudoba wahamba indlela motor yami wagijima.
Ujabulela Motor - Manje njengoba ngithole le moto ilungiswe futhi isebenza kahle, bengikuthokozela. Manje sekungu-May 10 futhi ngithole le moto izikhathi ezi-4 noma ezi-5. Ngaso sonke isikhathi lapho ngiyisebenzisa, kubukeka kuhamba kangcono futhi kangcono. Ngempelasonto edlule, ngoSuku Lomama, umndeni wethu ube nomhlangano endaweni kadadewethu es echibini elilinganiselwe. Ngize nesikebhe sami esincane sokudoba esasiyi-15 'Gheene Classic. Lesi sikebhe sifana nesikebhe esikhudlwana se-fiberglass esibuyiselwe isikwele semoto yesikebhe. Sengigijime kakhulu njenge-25 HP kulesi sikebhe kodwa nginamathisela i-3 HP Evinrude Lightwin yami lapho ngomqondo wokufundisa indodana yami eneminyaka engu-8 nomzala wami oneminyaka engu-9 ukuthi bayisebenzisa kanjani le nto. Ngemuva kwezikhombisi ezimbalwa, ngabadedela abafana futhi bagijimela kulo lonke leli chibi zaze zenelisa izinhliziyo zabo. Ngihlale ngababona kwesinye isikebhe nemoto eyi-25 HP kodwa abafana bazenzele ngokwabo. Ngabafana abasesikebheni kuphela futhi manje nokunye okuningi, isikebhe sahamba cishe nge-8 MPH. Bakwazile nokuziqalela ngokwabo imoto. Imoto ibithembekile futhi ngemuva kokuqala kokuqala bekuzoqala kabusha noma kunini lapho kudonswa okokuqala. Ngijabule kakhulu ngale moto encane ezonikeza iminyaka eminingi yokusetshenziswa nezinkumbulo. Ngihlela ukuhamba nayo njengesipele noma okuthile okuzodlalwa ngabafana ohambweni lokudoba eCanada ngasekupheleni kwenyanga. Manje yisikhathi sokuthi nginake amanye ama-motors enginawo lapha adinga ukulungiswa futhi abhalwe phansi.